Gole ka tirsan dowlada oo soo jeediyay in la sharciyeeyo hooyada caruurta lagu beerto. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Gole ka tirsan dowlada oo soo jeediyay in la sharciyeeyo hooyada caruurta lagu beerto.
La daabacay torsdag 28 februari 2013 kl 10.10
Gole dowlada u qaabilsan anshaxa culuunta la xirriirta caafimaadka ayaa bilaabay in uu ka hadlo arrinka hanaanka afka Iswidhishka lagu yiraahdo (surrogatmödraskåp) oo ah in dadka sababo caafimaad aan ubad u dhalin in ay ubad ku beertaan hooyo kale, waxayna in badan oo ka mid ah xubanahan golahan ay doonayaan in wax laga bedelo sharci imminka ka yaala Iswiidhan oo mamnuucay hooyada caruurta lagu beerto.
Laamanayaasha aan dhali karin ubad xag caafimaad iyo si kalaba ayaa lagu wadaa in loo oggolaado tusaale ahaan gabar la dhalatay ama saaxiib ku dhow in uu u dhalo ubad.
Madaxa golahan dowlada u qaabilsan anshaxa culuunta caafimaadka Kjell Asplund ayaa sheegay in hidisaha uusan aheyn mid ku qotoma lacag, ee uu yahay mid ku saleysan bina’aadanimada oo ah in qofka lagu beeranayo ubadka uu noqdo ehel dhow, sida gabadh walaal ah, dumaashi ama saaxiib u dhow laamanaha aan dhali karin ubad, doonayana in uu caawiyo.
Hanaanka hooyada lagu beerto ubadka ee Surrogatmödraskap, ayaa maanta laga oggoleyn Iswiidhan.
Maalintii shalay ayay idaacadda wararka ee Ekot waxay baahisay in Iswiidhan ay yimaadaan caruur gaareysa boqol oo nidaamkaasi ku beerashada caruurta ku dhashay waxayna lamaanayaasha heysta caruurtaasi ay u safreen dalal laga oggolayahy sidaasi.